ရှေးမြန်မာ..: သက္ကတ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
သက္ကတ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် စာအုပ်ပါ။
ရထားတာကြာပါပြီ။ ဘယ်နေ့ကရတယ်၊ ဘယ် link ကရတယ် ဆိုတာမမှတ်မိတော့ပါ။
မူရင်း သက္ကတ- အသံထွက် - အင်္ဂလိပ် ။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ link မှာရနိုင်ပါတယ်။
http://www.mediafire.com/file/mwdwhdmyvuo/Sanskrit - English Dictionery.pdf
( New link, updated on 04.10.09)
Posted by ရှေးမြန်မာ at 8/01/2009
သက္ကတ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် link ကို သွားတာ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုများ သွားယူလို့ရနိုင်မလဲ ပြောပြပေးပါဗျာ။
Pdfတွေ့ရင် အထက်က အစက်နှိပ်။
Dl လုပ်။ chrome နဲ့ဖွင့်ပါ။
ရှေးမြန်မာ October 04, 2009
အဆင်မပြေခဲ့ရင် zaymyolinn@gmail.com သို့ မေးပို့ပြီးတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်အောင်ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
MKT - Group October 26, 2009
သက္ကတ + အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါတယ်။
is this post gonna usefull for myanmar?
ရှေးမြန်မာ March 01, 2011
It would be most appreciate that you write your name to show some respect to all students and resercher who asked for this Sanskirt English Dictionery. This blog is providing sources for the student and researcher, I hope you will understand to answer for your own question,,,,